နေအိမ် / Archives for Arbitration Conference
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များလိုဗေးနီးယမျးကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာ Ljubljana အနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ
22/07/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အဆိုပါ Ljubljana အနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ (ချိပ်) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များလိုဗေးနီးယမျးကုန်သည်ကြီးများအသင်းအတွင်းဖွဲ့စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်နှင့်ဆလိုဗေးနီးအတွက်ဗဟိုခုံသမာဓိအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး. အဆိုပါချိပ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းန်ဆောင်မှုများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းတစ်ခုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့်လွတ်လပ်သောအုပ်ချုပ်ရေးကိုယ်တည်း, အများဆုံးအထူးခုံသမာဓိ, ဖျန်ဖြေခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။ အဆိုပါချိပ်တစ်ဦးနှစ်ရှည်လများအစဉ်အလာရှိပါတယ် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်ညီလာခံ, အနုညာတစီရင်စည်းကမ်းများ, ဆလိုဗေးနီးအနုညာတစီရင်
အိန္ဒိယတွင်သစ်ခုံသမာဓိဗဟိုချက် Gurugram ၏အိန္ဒိယမွို့၌ဖွင့်လှစ်တာဖြစ်ပါတယ်, ရုံအနောက်တောင်ဘက်နယူးဒေလီအနေဖြင့်တည်ရှိပြီး. အခုအသစ်ခုံသမာဓိဗဟိုချက်များအတွက်ပဏာမခြေလှမ်းဟာပန်ဂျပ်နှင့် Harayana တရားရုံးချုပ်မှ လာ.. ရှည်ရှည်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အစိုးရခွင့်ပြုချက်ကြောင့်ပေမယ့်ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးဖြစ်လာသည်နှစ်အနည်းငယ်ယူစေခြင်းငှါ,, […]
16/02/2016 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများအတွက်တတိယပါတီငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၏အခန်းက္ပ, တောင်းဆိုသူအတွက်ခလုတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ဆောင်ကြဉ်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်သည့်အခါ, တဦးတည်းကသူ့ Option အခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုငွေကြေးတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေးမိနိုင်ပါတယ်. တောင်းဆိုသူများအများဆုံးမကြာခဏ left အများကြီးမြို့တော်ရှိသည်နှင့်တစ်ဦးဒုက္ခရောက်နေဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး […]
အောက်မှာ Filed: Aceris ဥပဒေ SARL, အနုညာတစီရင်ဆုချီးမြှင့်, အနုညာတစီရင်ညီလာခံ, အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ်, အနုညာတစီရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, အနုညာတစီရင်စီရင်ပိုင်ခွင့်, နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ်, ကနေဒါအနုညာတစီရင်, တရုတ်အနုညာတစီရင်, အနုညာတစီရင်ဆုကို၏ဘက်တော်သား, Expropriation, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ဥပဒေ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး, ခွင့်အာဏာ, လန်ဒန်အနုညာတစီရင်, နယူးယောက်ကွန်ဗင်းရှင်း, ဆွစ်ဇာလန်အနုညာတစီရင်, third-ပါတီရန်ပုံငွေရှာခြင်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအနုညာတစီရင်, ဗင်နီဇွဲလားအနုညာတစီရင်